I-Krakow, Poland - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili eziphezulu e-Krakow
Okufanele ukwenze eKrakakow
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yaseKrakakow
Bukela ividiyo ngeKrakakow
I-Kraków (i-Cracow) ayisiyigugu nje lomlando nokubukwayo, iyilo PolandIdolobha lesibili ngobukhulu futhi lihlanganisa womabili amabhange omfula uWisla (noma iVistula). Phansi kwezintaba zeCarlathi, indawo yedolobha inabahlali abangaphezu kwezigidi ezingama-1.4 uma ufaka phakathi imiphakathi ezungezile.
Yize iKraków ihlukaniswe ngokusemthethweni yaba i-dzielnica eziyishumi nesishiyagalombili noma amabhola, enye nenye inesibalo esikhulu sokuzibusa kuhulumeni kamasipala, lesi sigaba sisanda kuqalwa futhi ngaphambi kukaMashi 1991, idolobha lalihlukaniswe izingxenye ezine zePodgórze, uNowa Huta, I-Krowodrza kanye nesikhungo sasendulo sedolobha laseKraków uqobo.
(I-Old City yomlando manje isendaweni esemthethweni eSifundeni (I), iStare Miasto. Noma ngabe amagama athi Stare Miasto asho 'idolobha elidala', akufanele lididaniswe nedolobha elidala lomlando laseKrakow uqobo, njengoba idolobha lakudala lesendulo linjalo ingxenye encane kuphela ese-District I Stare Miasto).
Eminye yemiphakathi ezungeze umphetho weKraków ingakukhombisa impilo yangempela yasePoland kude nomnotho ogxile kwizivakashi.
I-Old Town - Inomlando weKraków Old Town ongokomlando, kanye negquma laseWawel castle, i-Nowe Miasto ("Idolobha Elisha"), u-Nowy Świat ("New World"), Kleparz, Okół, ngaphambili elaliphakathi kwentaba yaseWawel. Idolobha Elidala kepha ngemuva kwalokho laba yingxenye yalaba bantu, iPiasek, iStradom neWarszawskie (ngokwengxenye yePrądnik Czerwony). Isikhungo esingumlando sakwaKraków, esimboza iDolobha Elidala kanye neWawel safakwa ohlwini lwe-UNESCO lwama World Heritage Sites e1978. Lezi izindawo ezithandwa kakhulu izivakashi, futhi uma isikhathi sakho sinqunyelwe, unganamathela kangcono kulokhu.
IKazimierz - Indawo eseduze impela neDolobha Elidala, idolobha elizimele ezikhathini zezikhathi zephakathi nekota yobuKristu eNtshonalanga kanye nekota yangaphambili yamaJuda eMpumalanga.
I-Zwierzyniec - Indawo eluhlaza impela eKrakow; kufaka phakathi iBłonia, ihlathi laseLas Wolski kanye neKosciuszko Mound.
Podgórze - Indawo engasosebeni oluseningizimu yomfula iVistula, lapho kwakukhona khona i-ghetto yamaJuda ngesikhathi sokuphathwa amaNazi.
I-Dębniki - Indawo eluhlaza eningizimu yeSouth West ye-Old Town, ehlanganisa iS Monniy yaseTyniec.
UNowa Huta - Indawo eyaziwa ngokuthi yi “New Steel Mill” eyakhiwe ngesikhathi sobukhomanisi.
I-Kraków iyidolobha elikhulu le-Underer Poland Voivodehip (iPoland: Małopolskie) esifundeni esiseningizimu yePoland futhi ibinabantu be-756,000 e-2007 (izigidi ze-1.4 ngemuva kufaka phakathi imiphakathi ezungezile).
I-Kraków yaziwa nangokuthi yi-Cracow, noma i-Krakow (ngaphandle kwe-diacritic) futhi iqala okungenani ngekhulu le-7th. Kwakuyizinhloko-dolobha zasePoland kusuka ku-1038 kuya kwi-1569 bese kuthiwe yiPoland-Lithuanian Commonwealth kusuka ku-1569 kuye ku-1596 (1609 ngamanye ama-akhawunti) futhi lo mlando omude ukwenze kwaba ngenye yezindawo ezihamba phambili zokufundisa kwezempilo yasePoland, ezamasiko nezomnotho.
IKraków ingelinye lamadolobha amadala kunawo wonke ePoland, kunobufakazi obukhombisa ukuthi kuhlala khona lapho kusukela 20,000BC. Inganekwane ithi yakhiwa emhumeni kadrako owayebulewe yinkosi yangempela uKrak. Kodwa-ke, okokuqala igama livela igama lalise-966 ngumthengisi ongumJuda waseSpain, owachaza njengesikhungo esibalulekile sokuhweba eSlavonic Europe.
I-Krakow iyindawo ethandwa kakhulu izivakashi ePoland futhi lokhu kusekela umnotho omningi wendawo. Kodwa-ke, iNyuvesi kanye namakolishi amaningi endawo kusho ukuthi imfundo umqashi obalulekile nayo.
Umkhakha wezinsizakalo zobuchwepheshe uqinile futhi uyakhula, lapho kuhlukaniswa khona amabhange amaningi, izinkampani zezimali nezobuchwepheshe ezifana neGoogle, IBM, Motorola, State Street, Shell, UBS, HSBC lapha. Kunomkhakha omkhulu wezokukhiqiza futhi, ikakhulukazi ngensimbi (ephethwe nguMittal), osokhemisi kanye nogwayi, ikakhulukazi njengefa lesikhathi samaKhomanisi.
Ukuntuleka kwemisebenzi kungaphansi kwesilinganiso (i-5%) ezweni lonke (i-9%) futhi kuthathwa njengethuba elihle lokutshala imali, ikakhulukazi kulabo abathenga izindlu nomhlaba. Kuhlelwa isifunda esisha sezezimali nelebhizinisi kanye nenkundla entsha yezemidlalo esifundeni saseNowa Huta emfuleni iVistula. Lokhu kwenzelwa ukwenziwa kabusha kwendawo kaNowa Huta, isifunda esimpofu kakhulu saseKrakow.
Isikhumulo sezindiza i-Kraków (eyaziwa nangokuthi yiJohn Paul II International Airport i-Kraków - Balice) yisikhumulo sezindiza esikhulu, esiseBalice, cishe i-12km entshonalanga yesikhungo. Kuyisikhumulo sezindiza esikhulu kunazo zonke Poland.
Ngokuya ngezinga lakho lokuqina, ungabona sonke isikhungo sedolobha ngaphandle kokudinga ukuthuthwa. Kunezindlela ezithile ezinhle zokuhamba, zama iRoyal Way noma ipaki yasePlanty ezungeze idolobha elidala yonke indlela ukusuka eSangweni likaFlorian ukuya esigodlweni seWaleli. Kuyaqabula kakhulu. Kukhona nebhange lomfula elinakekelwa kahle eduze kwenqaba yokuhambahamba.
Kodwa-ke, qaphela ukuthi ebusika iqhwa kwesinye isikhathi alisuswa emigwaqweni eseceleni, okuholela ekuxubeni kweqhwa nodaka. Qiniseka ukuthi uletha izicathulo ezingangeni manzi uma uhlela ukuhamba ngezinyawo ebusika.
Isikhungo esingumlando saseKraków, okubandakanya Idolobha Elidala, iKazimierz neNqaba Yezelwa, sifakiwe njengokokuqala kohlobo lwaso ohlwini lwama-UNESCO World Heritage Sites e1978.
Isifunda saseKazimierz ngamagugu aso angamaJuda sithakazelisa kakhulu. Isinagoge likaReuh, ngokwesibonelo, lakhiwa e1557. Yize ingalondolozekanga kahle futhi izindleko zokungena PLN5, zinesimo esihle sodonga lwaso ezindala nezingubo zalo zakudala. Eduze kwamathuna ayo adalwe ku-1511 futhi asanda kubuyiselwa. Umkhathi ushubile impela futhi kufanele ukuvakashelwa.
Isifunda saseNowa Huta sakhiwa ngesikhathi seKhomanisi Era, futhi senzelwe abantu abasebenza emisebenzini emikhulu yensimbi (izikhathi ze-5 ezinkulu kuneDolobha Elidala laseKrakow) lapho. Ukwakhiwa kwesifunda kuyinto yezenhlalo ejwayelekile; izakhiwo ezinkulu zizungeze amapaki aluhlaza. Isifunda manje asimpofu, futhi ungathinta ukungakhululeki kwangempela kwalezo zikhathi lapho. Isiteshi esikhulu yiPlac Centralny engafinyelelwa ngamathamu u-4, 10, 16, 21, 22 kanye ne-64.
Abahambi abeza eKrakak bavakashela kaningi AuschwitzIkamu leBirkenau. Abaningi bayazi ukuthi eKrakow bekukhona nekamu lokuhlushwa lamaNazi elisesifundeni sasePodgórze. Ungavakashela iFitch yakwaSchindler lapho.
Isifunda sase-Old Town sinikezela ngezitolo ezinhle kakhulu, ikakhulukazi izingubo, ubucwebe nobuciko. Ungazulazula nxazonke ngeDolobha Elidala neKazimierz, lapho kugcwele khona izitolo zasendulo. Isikhungo sakho konke lokhu yiRynek Główny (“Rynek” futhi isho “imakethe”), lapho uzothola khona ezinye zezitolo eziphambili zedolobha.
Maphakathi neRynek Główny kumi iSukiennice (Cloth Hall), isikhungo sokuhweba eKrakow amakhulu eminyaka. Wonke umhlaba ongaphansi uyimakethe, lapho abadwebi bendawo bathengisa izimpahla zabo. Funa ubucwebe be-amber kanye namafulegi esikhumba wezimvu. Yindawo enhle ukubheka ukuthi uyafuna yini ukuletha ucezu lwangempela lweKrakow ekhaya.
Uma ungumlutha wokuthenga, qiniseka ukuthi uhlola iRoyal Way (Floriańska - Rynek Główny - Grodzka) kanye nemigwaqo ezungeze iPlac Nowy esifundeni saseKazimierz.
Ngenhlanhla usengakwazi ukuthola okuyisisekelo kokudla okuphakathi nendawo ezitolo ezizimele nasezithendeni kodwa aqala ukunika indlela amahhotela asezingeni eliphezulu kanye nama-ejensi asebhange. Utshwala bungatholakala kalula ezitolo nasezitolo ezivamile ze-24 / 7.
Kunezitolo ezinkulu ezimbili endaweni ephakathi nendawo, ezibandakanya uhlu olukhulu lwezitolo zokuthenga nezindawo zokudla.
IGaleria Krakowska, ngokushesha eduze kwesiteshi esikhulu sesitimela kanye nokuhamba ngemizuzu engu-5 ukusuka ku-Main Square.
IGaleria Kazimierz (ul. Podgórska 34) etholakala empumalanga eseningizimu yeKazimierz, ebhange iVistula River inikeza i-36,000m2 yezitolo kanye nesitolo esikhulu se-Alma gourmet.
Inqwaba yamanye amaketanga aphesheya (Carrefour, Real, Tesco, Lidl) atholakala emaphethelweni / emaphethelweni iKrakow, okungukuthi: Bonarka (ul. Kamienskiego 11) enkulu kodwa kude kakhulu nendawo.
I-Krakow Plaza (al. Pokoju 44).
EPoland umuntu udla ukudla kwasekuseni okuhle kakhulu, isidlo sakusihlwa esikhulu (nge-3-4 pm) nesidlo sakusihlwa (ngase-7-8 pm). Abantu abaningi badla “ukudla kwasemini” njll. Kepha lezi akuzona ezendabuko.
Ukudla kukaKraków kuthonywe amasiko asebehlala enkabeni yeYurophu, kanye nombuso wase-Austro-Hungary.
Isitsha esibaluleke kakhulu esivela eKraków yi-obwarzanek (bagel). Ungayithenga ezitolo eziningi emigwaqweni. Enye into ekhethekile yendawo yi-oscypek - ushizi ovela ezintabeni zakwaTatra.
Uma ufuna ukuzama ukudla kwasePoland ngamanani entengo ebabazekayo (isidlo sasemini esikhulu somuntu oyedwa cishe we-8PLN) thola i-'Bar Mleczny '(ibha yobisi - uhlobo lwendawo yokudlela evame kakhulu ezikhathini zamaKhomanisi abizwa kanjalo ngoba ayasebenza abukho utshwala). Ungathola eyodwa ngakwesokunene se-Ul. I-Grodzka (uma usuka eRynek Glowny). Banikela ngokudla okuyisisekelo kwasePoland okufana ne- 'kroketka'. Kunconywa isichazamazwi sesiNgisi nesiPolish lapho si-oda. Ikhwalithi yensiza ibaluleke kakhulu, noma yanele. Intengo ephansi umgomo, ngakho-ke ingaphakathi lingagugile, futhi limatasa kakhulu nazo zonke izinhlobo zabantu kufaka phakathi abafundi basenyuvesi kanye nabasesikoleni esiphakeme, abangasebenzi, abangenakhaya.
Kubiza kancane ama-Studatns anjenge- “U babci maliny”, lapho i-PLN12-20 eyodwa ingazama izinketho ezahlukahlukene zokudla kwasemini okukhulu.
Kubantu abanama-wallets aqatha kukhona indawo yokudlela i- "Wierzynek" ku-Main Square. Baphakela nezitsha zasePoland.
Kunezindawo zokudlela eziningi ezisebenzela ukudla kwaseFrance - ikakhulukazi emahhotela amakhulu afana neDurban Percheron noma i-Restaurant Anromeda. Zitholakala ngokukhululeka futhi nakwabangewona izivakashi (nakanjani ukufinyelela kumahhala, isidlo sakusihlwa asikho). Ukudla isidlo sakusihlwa kule ndlela kubiza malini naseWierzynek Restaurant.
I-Żurek iyisobho esuselwa irayisi ebilisiwe - imuncu futhi inosawoti futhi imvamisa inezicucu ze-sausage noma ikhiyela leqanda elibilisiwe.
IBarszcz isobho elenziwe nge-beetroot - eyokosa kakhulu.
I-Chłodnik ngesinye isobho se-beetroot, esinikezwe amakhaza njengesitsha esiqabulayo sehlobo. Kwenza ukusetshenziswa kwama-beetroot greens kanye nezimpande, futhi kunongiwe ngama-gherkins, dill no-ukhilimu omuncu.
Ama-Pierogi ama-dumplings we-Kipolishi (okufana ne-ravioli) eza nokugcwaliswa okuhlukahlukene. Okuthandwa kakhulu yi- “ruskie” (iRuthenian), egcwele ushizi ophekwe ngamazambane, abanye bagcwele inyama, iklabishi kanye no-amakhowe, bese kuthi ipiyuni enoshukela iza nama-Blueberries, ama-aphula, ama-sitrobheli, nama-cherries. Ama-pierogi ezithelo ajwayele ukukhonzwa ngo-ukhilimu omuncu noshukela. Njalo ngonyaka, ngoSepthemba, iKrakow isingatha i- “Pierogi festival”, lapho ungazama khona izinhlobo eziningi zalesi sidlo.
Ngeke ukubone lokhu kumihlahlandlela eminingi, kepha enye yenjabulo yangempela yohambo oluya eKrakak ukuvakasha kwe-kiełbasa van. Ngokuyisisekelo, yilezi zinsizwa ezimbili zasePoland ezinamandla, njalo ebusuku ezivela e8PM-3AM, zibeka umlilo ovuthayo ngaphandle kweveni yazo (epakwe phambi kwemakethe empumalanga yeDolobha elidala eduze kwebhuloho lesitimela) kanye no-grill kielbasa. Kwi-8 PLN, uthola umvimba wakho, umqulu kanye nesikwele sesinaphi, ume endaweni ebanzi eseduze bese ushona phansi nabantu bendawo. Kumnandi, ikakhulukazi ngemuva kobusuku bokuhlola imigoqo kaKrakow. Isipiliyoni esimnandi samahhala esivakashi esivivinyayo futhi sisendleleni eyinhloko (ul. Grzegórzecka, opposite ul. Blich).
Ngokunye kokudla komgwaqo okuthandwa kakhulu eKrakow yi-zapiekanka okuyi-baguette enkulu ebheke ubuso evulekile enezimbobo ezibhakiweyo (ngokwesiko ushizi, amakhowe, kanye nokunye okubekiwe okufana ne-ketchup noma isoso segalikhi). Indawo enhle kakhulu, futhi ethandwa kakhulu, ye-zapiekanki isemakethe yePlac Nowy eKazimierz. Kusebusuku kakhulu ngezimpelasonto lapho ungazithenga khona kuze kube kusekuseni kakhulu.
EKrokow, njengamanye amadolobha asePoland, kunenombolo yokudla yamaTishi nama “Vietnamese” e-China. Abaningi banabasebenzi basePoland abangakaze bezwe ngoPho, akekho uSERVE Pho, futhi CISHE akekho okhonza ngisho nokude nesiShayina kanye / noma ukudla kwaseVietnam. Ngiyazi ukuthi kuyalingwa, kepha ungenza kangcono kakhulu ukubheka ukudla okuhle kwesiPolish. Kuyiqiniso, lezi ezibizwa nge- “Chinski” noma ama-Orientalny Bar ngokuvamile zinokudla okubi.
Uma ungangeni ekudleni kwasePoland, iKrakow inezindawo zokudlela ezinhle impela zase-Italiya, ezinama-pizza, i-pastas, kanye nokudla okujwayelekile kwase-Italy. Kukhona ezinye izindawo zokudlela eziningi ezisebenzayo Indian, French, Greek, I-Argentina, I-Mexican, noma i-cuisine yaseGeorgia, ngakho-ke ngeke ubambelele kokuthile okudliwayo ngenkathi ubona.
Uma konke okunye kwehluleka, iMcDonalds neKFC ziningi.
Amabha, ama-pub, kanye namakhekhe e-Krakow kungenye yezindawo zawo ezinhle kakhulu. Hhayi nje inani labo noma ikhwalithi, kodwa ukusondela. Kuthiwa kunezindawo ezingaphezu kokudla nokuphuza ze-300 edolobheni elidala kuphela.
Ungalingeki ukuthi uphuze ezindaweni zomphakathi ezinjengamapaki noma ungahlawuliswa i-100z
I-tatanka iyi-isiphuzo sasePoland esiyingqayizivele (futhi esimnandi) esenziwe ngejusi le-apula nohlobo olukhethekile lwevodka olubizwa nge-żubrówka, olunambithelwa ngotshani bison. Iphindze ibizwe nangokuthi yi-Szarlotka, noma ikhekhe le-apula. I-Tatanka yigama lendabuko laseMelika loNyathi.
I-Wódka miodowa iyi-vodka yezinyosi, evame ukuhanjiswa ibolile. Ezinye izindawo zokudlela ezingcono ezinezi-Polish-themed zizoba nemikhiqizo yasendlini.
U-Śliwowica, i-brand plum, kufanele akuqaphele. Kunokuhluka okubalulekile okubili: i-80-proof (40%) tinged eyodwa ne-140-proof (70%) clear clear. Ngenkathi izinhlobo ze-80-proof zihlala zibushelelezi futhi zinambitheka, abanye bafanise ubufakazi be-140 nokuphuza uphethiloli. Indlela enhle yokuyiphuza ukubhekana nayo ngokungathi shusa. Thatha isipuni esincane noshukela, uthele iSliwowica kuso bese usishisa. Vumela ushukela uncibilike phansi isikhashana (imizuzwana engu-10-30). Ngemuva kwalokho, hlanganisa ushukela ovuthayo nezinye iziphuzo. Mayishise imizuzwana ye-5-10, bese uyiqhumisa uyiphuze. Qaphela ungashisi izindebe zakho! Ungayivumela ukuthi ivutha isikhathi eside, kepha bese usebenzisa utshani ukuyiphuza ukugwema ukushisa iminwe noma izindebe zakho.
I-Grzaniec, uhlobo lwe wayini evuthayo enama-clove nezinye izinongo, ithandwa kakhulu ngoKhisimusi lapho ithengiswa eMakethe Square.
Ngenxa yokusondela kwabo komunye nomunye, izimbobo zokunisela zeKrakak zilungele ukugoba ibha. Abantu bendawo nabavakashi abaningi bachitha ubusuku babo behlukana ukusuka e-Old Town yonke indlela eya eVistula River ekugcineni kweKazimierz. Hamba phansi ul. I-Szeroka noma ikhanda uye ku-plac Nowy yemigwaqo egcwele imigoqo.
Njengoba imigoqo eminingi ifihlwe ngaphansi kwezivakashi ezingaphansi komhlaba zivame ukukhetha ukujoyina ukukhamba kwe-pub, zihamba ngamaqembu phakathi kwenqwaba yamabha anomhlahlandlela wokuqinisekisa ukuthi awahlaselwa umugqa wobubi.
Ezinyangeni ezifudumele, ubusuku bukaKraków buhamba ngaphandle buye emakhukheni amakhulu asendleleni nasezivandeni zikabhiya. Lapho ubusika bufika bezungeza, buhamba ngaphansi komhlaba kuma-cellars azungeze idolobha.
IKrakak ayigcwele nje kuphela ikhefi, kodwa futhi kuthiwa yindawo yekhefi yokuqala eyasungulwa eYurophu. Amakhofi amaningi anikeza i-espresso enhle nokuthile okungabhoboza ngentengo enhle kakhulu. Njengomthetho, izindawo ezibukeka emazweni aphesheya zibiza kakhulu.
Kujwayelekile ukuthi kube ne-Wi-Fi yamahhala emigoqweni nasehostela.
Ama-Polish WiFi abiza intela ephaketheni ama-WiFi ama-router avumela abahambi ukuthi bahlale bexhunyiwe ePoland. Amaklayenti angabhuka online futhi hotspot yawo ingahanjiswa yonke indawo ePoland emahoreni e-24. Ukulethwa okujwayelekile ePoland kubhokisi leposi yi-3 €, ekhelini langasese, ehhotela noma i-B&B yi-4 €.
Ama-hotspots we-3G ne-4G angabiwa ngamadivayisi afinyelela ku-10 bese i-battery ihlala amahora we-6.
Njengalo lonke iPoland, iKrakow imvamisa idolobha eliphephe kakhulu elinamaphoyisa aqinile.
Ukuziphatha okunobudlova akuvamile kakhulu futhi uma kwenzeka kwenzeka kakhulu okuhlobene notshwala. Ngenkathi ama-pub kanye nama-kilabhu ephephile, imigwaqo eseduze ingaba yizigcawu zokukhalaza, ikakhulukazi ebusuku. Zama ukugwema izingxabano. Abesifazane namantombazane ngokuvamile mancane amathuba okuba babhekane noma bahlukunyezwe ngoba indlela yokuziphatha yasePoland iyenqabela ngokuphelele noma yiluphi uhlobo lodlame (ngokomzimba noma ngomlomo) olubhekiswe kwabesifazane.
Landela imithetho ejwayelekile yokuhamba yedolobha: ungashiyi izinto ezibalulekile emotweni emehlweni asobala; ungakhombisi imali noma izinto ezibizayo ngokungadingekile; wazi lapho uya; sola abantu ongabazi becela imali noma uzama ukukuthengisa okuthile. Amaphakethe ayasebenza, unake okungokwakho ngezixuku, eziteshini, ezitimeleni / amabhasi agcwele kakhulu (ikakhulukazi kuye / kusuka esikhumulweni sezindiza), kanye namakilabhu. Kunoma ikuphi, ungesabi ukufuna usizo noma izeluleko emaphoyiseni (Policja) noma kumaGija kaMasipala (uStraz Miejska). Ngokuvamile ziwusizo, zinenhlonipho futhi ezimweni eziningi zikhuluma okungenani isiNgisi esiSisekelo.
Izindawo ongazivakashela eduze kweKrakak